Hatidi yemahara software. Tinoda makwikwi emahara | Linux Vakapindwa muropa
Hatidi yemahara software. Tinoda makwikwi emahara
Vanhu vazhinji munyika yepachena software funga kuti tichiri muma 90's. kuti hurukuro inoenda kuburikidza kana iwo maapplication anoshandisa mahara kana epamutemo marezinesi. Ichokwadi ndechekuti nhasi izvo hazvina basa. Makambani makuru akaratidzira kuti ivo havafanirwe kudzora kuwana kodhi kukunda makwikwi uye kuwana mari.
Ngatitii ini ndawana fomu yeCoca Cola. Ini ndinoshandura zvimwe zvinhu kuti zvive noutano, tastier uye isingadhuri uye ini ndinotanga kushambadza mhedzisiro. Ini ndinoposita recipe pawebhu pasi peyakavhurika rezinesi kuitira kuti vamwe vanhu vagone kuita zvakafanana. Zvingakonzera dambudziko kukambani here?
Kwete, nekuti fomura, kuravira uye mutengo ndiwo mashoma acho. Simba rakakura reCoca Cola nderorudzi rwayo rwunozivikanwa pasi rese uye nharaunda huru yekuparadzira Ivo vanogona kutyisidzira mabhizinesi anobvuma kugovera chigadzirwa changu nekusavarega vachitengesa avo. Nesimba ravo rehupfumi vangamanikidza vezvenhau kuti vasatambire kushambadza kwangu. Uye, hapana zvavaigona kuita. Mushure mezvose, vane mukana wekushambadzira kweanopfuura makore zana.
Nharaunda inowanzo taura neruremekedzo rwechitendero nezve rusununguko rwune rwemahara software
Iko rusununguko rwekushandisa chirongwa ichi, kune chero chinangwa.
Iko rusununguko rwekufunda mashandiro anoita chirongwa uye nekuchichinjisa, kuchichinjira kune zvako zvaunoda (kudzidza).
Iko kusununguka kugovera makopi echirongwa, nekudaro kubatsira vamwe vashandisi (kugovera).
Iko rusununguko rwekuvandudza chirongwa uye kuita izvo zvigadziriso kuruzhinji kune vamwe, kuitira kuti nharaunda yese ibatsirwe.
Rusununguko urwu Ivo vaibatsira kwazvo mumazuva apo software yaigovaniswa pane yepanyama svikiro, asi izvo hazvina basa zvachose munyika umo makambani esoftware ari kushandurwa kuita makambani ebasa.
Ndicho chikonzero Nhasi, makuru emakambani emakambani haangorwire mahara software. Mune zvimwe zviitiko vanopa pachenauye. Kwavanowana mari hakusi mukutengesa marezinesi kana kudzora mukana wekodhi. Asi, zvinosuruvarisa ichiri mukuva nevashandisi vevashandisi uye vanogadzira.
Mumwe munhu akarondedzerwa nedimikira rinotonhorera zvazvinoreva kukwikwidza neaya makuru maekambani emakambani.
Unogona kunge uri timu yenhabvu yepamusoro, asi urikutamba uchipesana nechikwata chine nhandare, bhora, uye ligi, uye vanogona kushandura mitemo pese pavanenge vachida.
Panzvimbo pekuganhurira kuwana kodhi, nhasi isu tine mamwe maitiro zvakanyanya kana zvine njodzi se
Iko kushambadzira kwevashandisi 'zvakavanzika data.
Kugumira kuwana kana kuwedzeredza vangangokwikwidza kuwana mapuratifomu akakurumbira
Kugoverwa kwezvakanakira mumafomu asina kuziviswa mumapuratifomu ekushandisa.
Shanduko mumamiriro ekushandisa pasina kubvunza.
MunaNdira wegore rino, kunzwa kwakaitwa neImba Judicial Subcommittee paAntitrust, Commerce uye Administrative Mutemo. Mariri, vamiriri vemakambani madiki ehunyanzvi-akatsanangura zvakajeka kuti dambudziko ratiri kutarisana naro nhasi nderei.
Pakavhurwa zvitoro zvepamutemo zveapp, ini ndaive mumwe wavo aifarira kutsigira. Mushure mezvose, icho chaisava chinhu kunze kwekushanduka kwemifungo iyo Linuxers vanoziva kwenguva yakareba; zvinyorwa uye maneja emapakeji.
Pfungwa, zvitoro zveapp zvaizotidzivirira kubva kuzvirongwa zvakashata, kuve nechokwadi chekuenderana, kubvumira vanogadzira vakazvimiririra kukwikwidza sevakaenzana uye haufanirwe kunetseka pamusoro pekuvandudzwa.
Mukuita se yakashanduka ikava yekuvanzika hope uye chikonzero chekupokana nemakwikwi maitiro neiyo duopoly Google neApple.
Aya makambani, pamwe neiyo online yekutengesa hofori yeAmazon, uye pasocial network Facebook zviri kuferefetwa nezviremera zveEuropean Union neUnited States.
Isu takatotaura muLinux Vakapindwa muropa ne kupomerwa kubva kune aimbove weCollegeHumor mushandi pamaitiro ekunyorwa kweFacebook manhamba kwakakonzera kudonha kweimwe yeanonyanya kufarirwa majee portal pawebhu. Isu tinovharawo zvirevo zvekutengesa mushandisi data.
Semukuru pane wireless mutauri mugadziri Sonos akadaro
Aya makambani ane simba rakawandisa zvekuti kana Google kana Apple ikabvunza chimwe chinhu, iwe hauna imwe sarudzo kunze kwekuvapa.
Munyaya inotevera tichaona mune zvakadzama kupomedzerwa Google, Apple neAmazon izvo zviri kuongorora muUS uye EU
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Hatidi yemahara software. Tinoda makwikwi emahara
Hari seldon akadaro
Ndokunge, hatidi rusununguko asi rusununguko.
Kutaura kune ngozi zvakadii!
Pindura Hari Seldon
Hatidi maranjisi, tinoda matai… hazviite zvine musoro, handiti?
Handizive, handina kumbobvira ndaedza muto weturu
Dambudziko remahara software nderekuti mune yazvino mamiriro haina kunyatso chengetedza rusununguko rwainoshambadzira, nekuti hazvidiwe kugovana kodhi kuburikidza newebhu (SaaS), ichi hachisi chinhu chinopfuura chinonyadzisa kufamba kwevakafanana zvekare . Iyo chete rezinesi rakakodzera mupfungwa iyi iAGPL, iyo inorambwa zvinoshamisika nemakambani makuru e tech.
Mupiro wakanaka. Ndatenda
»Iko kusununguka kusiri kudikanwa nhasi»
Zvinonyadzisa sei chinyorwa!
Vanhu vakaita semunhu anoita hutsinye uhwu ndivo vechokwadi veTaliban, vanoshora mahara software yemari shoma yavanogadzira nekuita mari chiteshi uye nekushora iyo yekambani nenzira yekunyepedzera.
Carlo C. akadaro
Vakauya pamutengo unonyora uyu murombo.
Pindura Carlo C
Rusununguko rweMakwikwi haruzombowanikwa kuburikidza nemuviri mumwe chete unoburitsa monopolies, Nyika.
Pane nzira here yekuvhara zvinyorwa zvemunyori uyu? Nekuti chinotevera chinhu kumira kushanyira iyo blog.
Munyori wenyaya ino anozvidzikisira zvese kumakwikwi uye purofiti, uye anopedzisa, nenzira yekuchimbidza uye isina hunhu, kuti hatichadi nerusununguko rwechina rweFree Software. Vabiridzi vakagadzira kufamba vakagara vachitsvaga rusununguko rweruzivo neruzivo, kwete kukwikwidza kana mari. Richard Stallman ainyatsoziva kuti kune mari zhinji inogadzirwa nepropathiary software uye neruzivo rwakavharwa, asi akasarudza imwe nzira, akasarudza chinzvimbo chehunhu.
Maitiro akashata, rusununguko rwemahara software zvichiri kudikanwa kana kupfuura nhasi kupfuura zvavaimboita. Kune rimwe divi, iro sangano reruzivo rinopa matambudziko matsva anofanirwa kugadziriswa nemhinduro nyowani (AGPL semuenzaniso).
Iyi ingori mibvunzo yakasiyana.
Alex Borrell akadaro
Chinyorwa chine zvakawanda zvisingawirirane. Ndezvekungoda kutariswa here?
Pindura kuna Alex Borrell
Kupesana neApple neGoogle. Kupomerwa muEurope neUS
ATOM Trudograd: inonakidza kwazvo RPG yeLinux